Led Display, Led Tv Display, Led Display Transparent - EYELED ဖြစ်သည်
ပုံသေ LED Display
အငှား LED Display
Curtian ဦး ဆောင်ပြသသည်
ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို ဦး ဆောင်ပြသသည်
Digital Visual LED Display ဖြစ်သည်
စွမ်းအင်ချွေတာသော LED Display
Creative LED Display မျက်နှာပြင်
Smart Business LED Display ဖြစ်သည်
သေးငယ်သော Pixel Pitch LED Display
Shenzhen Aiyang Photoelectric Technology Co. , Ltd
EYELED LIGHTING LIMITED သည် HongKong နှင့် ShenZhen (အခြားပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတစ်ခု) တွင်ရှိသောအရည်အသွေးမြင့် LED Display ထုတ်လုပ်သူ & စွမ်းအင်ချွေတာရေးဖြေရှင်းချက်ပေးသွင်းသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်လစဉ်စတုရန်းမီတာ ၂၀,၀၀၀ ရှိသော led ဖန်သားပြင်များရှိသည်။
အပြင်ဘက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖောက်ထွင်းအလှဆင် LED Vide ...
Small Pixel Pitch 1080p Video Hd Indoor P2.5 /p ...
Hd Indoor အသေးစား Pixels Pitch Led Display Screen ...
P2 Outdoor Indoor Video Wall Hd Tv ကြော်ငြာ ...
OTOPYYK TOPCP16-33D အရောင်အပြည့်ပွင့်လင်း Flex ...
HD P2 P2.5 P3 P3.5 P4 Outdoor Indoor Wall Flexi ...
OTOPYYK TOPCP25-25D Creative Hollow LED Screen
OTOPYYK TOPCP20-20D Outdoor High Brightness Ene ...
ကျေးဇူးပြုပြီးငါတို့ဆီကိုထွက်သွားပါ၊ ငါတို့ ၂၄ နာရီအတွင်းဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်
LED display လုပ်ငန်းကိုမျှော်မှန်းထားသည်။ ...
LED display လုပ်ငန်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်ပြန်လည်တည်ဆောက်မှုကာလတစ်ခုသို့ပို့ဆောင်ပေးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ စျေးကွက်သုတေသနအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သော Trend Force ၏နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာအရကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ LED display output သည် ...
၁. အပြင်ဘက်ရှိကြီးမားသော LED display ကိုတစ်ခုတည်းသော LED display များဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး pixel pitch သည်ယေဘုယျအားဖြင့်အတော်လေးကြီးမားသည်။ အသုံးများသောသတ်မှတ်ချက်များမှာအဓိကအားဖြင့် P6, P8, P10, P16 စသဖြင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
လိပ်စာ: အခန်း ၁၄၀၁၊ အဆောက်အအုံ A၊ Jiansheng အဆောက်အအုံ၊ ရှန်ကျန်း၊ ကွမ်တုံ၊ တရုတ်
ဖုန်း - 8613798311026
မည်သည့်စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ၊ မေးခွန်းများသို့မဟုတ်ချီးမွမ်းခြင်းများအတွက် ကျေးဇူးပြု၍
©မူပိုင်ခွင့် - ၂၀၂၁ - All Rights Reserved